caramelized walnuts ဖြင့် ချိစ်အစပ် - ကြော် | ကြော်တယ်။
caramelized walnuts ဖြင့် ဒိန်ခဲ သုတ်ခြင်း။
Alicia tomero | 31/10/2021 22:13 | အစ, ကလေးများအတွက်မီနူးများ, ချက်ပြုတ်နည်းများ, ဒိန်ခဲချက်ပြုတ်နည်းများ
နူးညံ့သောအရသာဖြင့် ဤလက်ရာမြောက်သော မုန့်လုပ်နည်းကို ရှာဖွေပါ။ ဒိန်ခဲ သူတို့နှင့်အတူချိုမြိန်သောအရာတစ်ခုခု caramelized သစ်ကြားသီး။ ပြင်ဆင်ရန် လွယ်ကူသောနည်းလမ်း၊ ပြင်ဆင်ထားပြီးသော မုန့်ထုပ်များနှင့် ရှုပ်ထွေးမှုများများစွာမရှိသော ဖြည့်စွက်စာတို့ဖြင့် သင်နှစ်သက်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် မိသားစုတစ်ခုလုံးနှင့် တွဲစားရန် ချက်နည်းဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် အချိန်မရွေး aperitif အဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။
သင် empanadas ကြိုက်နှစ်သက်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏ချက်ပြုတ်နည်းကိုစမ်းသပ်နိုင်သည်။ 'အဖွားမုန့်တီ'။
ပြင်ဆင်ပြီးသော ထောပတ်ဖြင့် မုန့်ထုပ် ၁ ချပ်
အညိုရောင်သကြား2ဇွန်း
ကုန်တယ် walnuts2ဇွန်း
မျက်နှာပြင်ကို ပွတ်ဖို့ ကြက်ဥ ၁ လုံး
ငါတို့ဖြတ်ခဲ့တယ် ကြက်သွန်နီကို အတုံးသေးသေးလေးတွေ လှီးထားပါ။ ဒယ်အိုးတစ်လုံးကို သံလွင်ဆီအပူပေးပြီး ဆားအနည်းငယ်နဲ့ မိနစ်အနည်းငယ်လောက် ကြော်ပေးပါ။ ငါတို့ဖယ်ထား။
ဒယ်အိုးသေးသေးတစ်လုံးထဲမှာ ဟင်းရည်ထည့်ပါ။ အညိုရောင်သကြားနှစ်ခုဇွန်း. အနည်းငယ် အရည်ပျော်လာပြီး caramelize ဇွန်းနှစ်ဇွန်းထည့်ပါ။ သစ်ကြားသီး။ အခွံမာသီးများတွင် caramel ကို impregnated ဖြစ်စေရန်အလှည့်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းတို့ကို မုန့်ဖုတ်စာရွက်ပေါ်တွင် ထုတ်ယူပါ။ အေးမြပြီး ခိုင်မာစေရန်။ ပြီးရင် walnuts ကို အပိုင်းပိုင်းဖြတ်ပြီး ဖယ်ထားလိုက်ပါ။
ပေါင်မုန့်ကို အညီအမျှ နှစ်ပိုင်းခွဲပါ။ ဖြတ်မယ်။ မုန့်စိမ်း၏အနည်းငယ် strips တွေ ငါတို့ကပိတ်တဲ့အခါ puff pastry အလှဆင်ဖို့။
ကျွန်တော်တို့ ပါတီတွေထဲက တစ်ခုထဲ လောင်းထည့်တယ်။ brie ဒိန်ခဲ အပိုင်းပိုင်းများ သို့မဟုတ် အတုံးများခွဲ၍ မုန့်စိမ်းပေါ်တွင် ဖြန့်ပါ။ ကြက်သွန်နီနှင့် caramelized walnut အပိုင်းများကိုထည့်ပါ။
မုန့်စိမ်း၏အခြားတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့အားလုံး patty ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ရေအနည်းငယ်နှင့် ကျနော်တို့အနားတံဆိပ်ခတ် အလှဆင်ပုံသဏ္ဍာန်လေးတွေနဲ့ လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ ညှစ်လို့ရပါတယ်။ ငါတို့နေရာ အပေါ်မှ မုန့်စိမ်းတုံးများကို လှိမ့်ပေးပါ။s လိမ်ပုံသဏ္ဍာန်များနှင့်အတူ, ငါတို့သည်သူတို့ကိုရေအနည်းငယ်နှင့်အတူကော်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ကြက်ဥရိုက်တယ် မုန့်ဖုတ်တဲ့အခါ မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံး ညိုသွားအောင် ပွတ်ပေးပါ။ ကျွန်တော်တို့က မီးဖိုထဲမှာ ထည့်ပေးလိုက်တာ။ မိနစ် 180 အဘို့ 15 °.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ပြန်လည် » ကလေးများအတွက်မီနူးများ » caramelized walnuts ဖြင့် ဒိန်ခဲ သုတ်ခြင်း။
Bucatini alla versuviana